Shiinaha 16/19/24 inch Bowl Leaf Bud Trimmer Warshada Soo saarta Qalloocan Warshada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Virex
Makiinadayada qalloocan ee birta caleenta gooysa waxay xirtaa awoodda 30 maqas ee 1 gooyo si ay u bixiso nadiif & hufan iyadoo la yareynayo waxyeelada dhirta. Xariijimaha caagga ah ee darajada cuntada waxay si hufan u xamili karaan dhirta iyagoo leh daryeel jilicsan waxayna yareynayaan ku dhegganaanshaha haraaga inta lagu jiro isticmaalka, badbaado leh oo aan ubax waxyeelo gaarin. Waxaan bixinaa bir fiiqan oo aan lahayn birta si aan ugu adeegno baahiyahaaga gooyn ee kala duwan. Daabka tooska ah waxaa loogu talagalay jarista dhirta qoyan, halka siliga "X" loo isticmaalo geedka engegan. Waxaan ku kalsoonahay inaad jeclaan doonto tayadayada.
1, 30 jeer ka dhaqso badan maqaska
2, Goyn degdeg ah oo hufan
3, fududahay in la isticmaalo oo si fudud loo qaadi karo
4, Nabdoon oo aan waxyeello ubax lahayn
5, fududahay in la nadiifiyo ka dib isticmaalka
Magaca Alaabta 16inch 19inch iyo 24inch Warshada Tooska ah ee Beerta Guryaha cagaaran ee Nidaamka Hydroponic Mashiinka Goynta Makiinada Budada
Cabbirka 16inch, 19inch, 24inch
Dharbaaxo Rubber & Silikoon
midabka faleebo Madow, casaan, guduud, cagaar iyo oranji
sanduuqa Gear Bir & Caag
daab 1 * daab toosan iyo 2* silig iskutallaabta ah
1. Waxaan bixinaa OEM / ODM.
2. Waxaan aqbalnaa amarka yar.
3. Waxaan bixinaa nidaamka adeegga iibka kadib.
4. Dhammaan alaabtayada ayaa si taxadar leh u tijaabin doonta waaxdayada QC si loo hubiyo tayada heerka sare.
J: Haa, waxaanu bixinaa OEM/ODM.
J: Kooxda kormeerka tayada alaabta xirfadeed waxay dammaanad qaadaysaa heerka amarrada cilladaysan; Haddii kale, waxaan si buuxda u qaadi doonaa mas'uuliyadda sida waafaqsan nidaamka taageerada iibka ka dib.
A: Awoodda wax soo saarka ee warshadeena waa 1000 unug trimmers caleen bishii.
Q5: Sideen ku heli karaa Liiskaaga iyo liiska qiimaha?
Q6: Sideed u rartay alaabta? Ilaa intee ayay qaadanaysaa?
J: Sida caadiga ah waxaa lagu maraa express, badda iyo tareenada. Wadamo kala duwani waxay leeyihiin waqtiyo kala duwan. Iyada oo ku xidhan doorashadaada, express caadi ahaan waxay qaadataa 5-7 maalmood, badda iyo tareenada waxay qaataan qiyaastii 25-45 maalmood.
Hore: Mashiinka jarrida caleen koronto oo beeryaro ah
Xiga: Spectrum Full LED Iftiin Wax ku oolnimada Sare ee Xakamaynta Garaad Naqshad Koritaanka Iftiinka LED
Caleemaha Korontada ee Bud Trimmer Beerta cagaaran ee Hyd...
Si Toos ah u gooyay Caleenta Qulqulka Qulqulka Goynta haramaha